Iintlanzi ezintathu-umsila | Ngeentlanzi
El iintlanzi ezintathu ezinomsila le yintlanzi encinci, malunga neesentimitha ezingama-20, umzimba oxineneyo kwaye unamehlo amakhulu. I-operculum ineentsiba ezintathu ezithe tyaba kwaye i-preopercle igqityiwe ekugqibeleni. Kukho izikali eziphakathi kwama-36 nama-39, ezinobungakanani obukhulu kumgca wecala, ogqityiweyo kwaye uphela apho umsila uqala khona.
Ngaphandle kwamacandelo, onke amaphiko makhulu ngokunxulumene nomzimba, kuba isiphelo somqolo sinesangqa sesithathu esijikelezayo esikhulukazi kunaso sonke, kwaye amaphiko e-pelvic amade kakhulu, ngakumbi emadodeni.
Umsila uqukethe i-lobes ephawulwe kakhulu, esezantsi inde kunale ephezulu. Umbala wemisila emithathu uphakathi kwepinki kunye neorenji, kwaye inamaqela amathathu atyheli ahlukileyo kwicala ngalinye lentloko, eyokuqala iwela iliso leentlanzi kwaye ezinye zingezantsi. Kwindoda, iingcebiso zamaphiko e-pelvic ziphuzi, kwaye ziba bomvu xa kushushu.
Iindidi ze Iintlanzi ezintathu ezinomsila zihlala kwiingqaqa zekorale, phakathi kwama-20 nangaphezulu kwe-50 m ubunzulu, nangona ngamanye amaxesha inokufumaneka kuma-200. Idityaniswe kwiibhanki zobuninzi bentshintsho. Kufuphi nomphezulu ikwahlala emiqolombeni okanye kwimingxunya yelungu elithile. Umsebenzi wayo mkhulu ngexesha langokuhlwa kunaphakathi kwemini. Yondla nge-zooplankton, izilwanyana ze-epibenthic, kunye neentlanzi ezincinci.
Yiyo iintlobo ze-hermaphrodite. Kubonakala ngathi kukho ulawulo oluthile phakathi kwamadoda, ubuncinci ngexesha lokuzala, xa ngakumbi okanye kuncinci ukwenziwa kwemilo phakathi kwabo kuqhelekile. Ivelisa ehlotyeni kwaye amaqanda ayiplanktonic.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Iintlanzi ezintathu ezinomsila
Iintlanzi zeguppy kunye nokunyamekela kwazo